Koorsooyinka QGIS - Geofumadas
#GIS - ArcGIS Pro iyo QGIS 3 koorso - oo ah isla howlaha
Baro GIS adiga oo adeegsanaya labada barnaamijba, isla moodal xog isku mid ah Digniin Koorsada QGIS waxaa asal ahaan lagu abuuray Isbaanish, iyadoo la raacayo casharro la mid ah kii koorsada caanka ah ee Ingiriisiga Baro ArcGIS Pro Easy! Waxaan u sameynay inaan muujino in waxaas oo dhan ay suurta gal tahay anagoo adeegsanayna barnaamij furan; had iyo jeer Isbaanish Ka dib, qaar ka mid ah isticmaalayaasha…
Koorsooyinka ArcGIS Koorsooyinka GIS Koorsooyinka QGIS
#GIS - Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiyeed ee leh QGIS
Baro sida loo isticmaalo QGIS iyada oo la adeegsanayo laylisyo wax ku ool ah oo la adeegsanayo QGIS. -Waxaad jimicsi kasta oo aad ku sameyn karto ArcGIS Pro, lagu sameeyay barnaamij bilaash ah. -Import data CAD to GIS -Itiminta-ku-saleysan-xisaabinta -Xisaabinta ku saleysan -La daabacaadda -Maxkamida isku-dubbaridka ka socda -Barrying scan -Georeference images Dhamaan feylasha ...
Koorsooyinka GIS Koorsooyinka QGIS
#GIS - QGIS 3 koorso talaabo talaabo ah oo xoq ah
Koorsada QGIS 3, waxaan ku bilaabeynaa eber, waxaan toos ugu tagnaa meesha ilaa aan ka gaarno heer dhex dhexaad ah, ugu dambeyntiina shahaado ayaa la siiyaa. Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiga QGIS, waa koorso loogu talagalay gebi ahaanba qaab ficil ah. Waxa kale oo ay isku daraa qaybta ugu yar ee fiqiga ee u oggolaaneysa ardayda inay ku saleeyaan aqoontooda GIS, ...